महामारीको समयमा कसरी YouTube लाइभ प्रयोग गर्ने? - सबपल्स
YouTube अनुकूलन किन्नुहोस्
महामारीको समयमा कसरी YouTube लाइभ प्रयोग गर्ने?
कोरोनाभाइरसको आक्रमण सुरु भएदेखि नै संसारभरिका सोशल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले बिभिन्न सोशल मिडिया अनुप्रयोगहरूमा शरण लिएका छन्। सब भन्दा ठूलो सामाजिक प्लेटफर्महरू YouTube मा महामारीको कारणले यसको मासिक दर्शक संख्यामा एक स्काईरोकेट रेकर्ड गरिएको छ।
अधिक र अधिक व्यक्तिहरू मनोरन्जनका लागि अनलाइन प्लेटफर्महरूमा मोडिरहेका छन्, यी प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई अधिकतम बनाउन मद्दत गर्न आफ्ना सुविधाहरू पनि स्तरवृद्धि गरेको छ। साना च्यानलहरू पनि भाग्यमा छन् किनकि महामारीको समयमा दर्शक संख्या बढेकोले प्रमुख बृद्धितर्फ एक मार्ग खोलिएको छ। यस्तो सुविधाले सिर्जनाकर्ताहरूलाई तिनीहरूको दर्शकहरूसँग वास्तविक समयमा अन्तर्क्रिया गर्न र स्थिर ग्राहक आधारमा वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ YouTube लाइभ।
यो एक विशाल कर्पोरेट ब्रान्ड वा खेल स्ट्रिमिंग च्यानल हो; सबैले धेरै फाइदा लिन सक्दछन् यदि तिनीहरूले YouTube मार्केटिंगको लागि लाइभ सुविधा प्रयोग गरे। यस प्लेटफर्ममा प्रत्येक च्यानलको लक्ष्य भनेको YouTube भिडियोहरूको स of्ख्यामा स्थिर वृद्धि ल्याउन र वास्तविक YouTube ग्राहकहरू प्राप्त गर्नु हो। यो हुनको लागि, यो प्लेटफर्मले प्रस्ताव गरेको हरेक सुविधाहरू प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, र यूट्यूब लाइभ ती मध्ये एक हो। यहाँ सबै तपाइँलाई जान्नु आवश्यक छ YouTube मा कसरी लाइभ स्ट्रिम गर्ने भनेर प्रत्येक वाचकमा स्थायी प्रभाव छोडिदिने बारे।
प्रत्यक्ष स्ट्रिमि Enable कसरी सक्षम गर्ने
YouTube ले प्रत्यक्ष स्ट्रीमिंगलाई पूर्वनिर्धारित विकल्पको रूपमा प्रस्ताव गर्दैन। तपाईंले विशेष रूपमा यो सुविधा सक्षम गर्नुपर्नेछ र यूट्यूबलाई सक्रिय पार्न यसको लागि कुर्नु पर्छ। यहाँ छ कि कसरी तपाइँ तपाइँको खाता मा प्रत्यक्ष स्ट्रीमिंग सक्षम:
प्रत्यक्ष स्ट्रिमि only विकल्प मात्र प्रमाणित YouTube खाताहरूको लागि उपलब्ध छ। यदि तपाईं यो सुविधा सक्रिय गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले पहिले यो सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ कि तपाईंको खाता पनि प्रमाणित भयो। यदि यो प्रमाणित गरिएको छैन भने, जानुहोस् www.youtube.com/verify, आधारभूत विवरणहरू भर्नुहोस् र तपाईंको फोनमा पठाइएको प्रमाणिकरण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईंको खाता प्रमाणित भयो, डेस्कटप प्रयोगकर्ताहरू YouTube ड्यासबोर्डमा जान्छन् जबकि स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको यूट्यूब अनुप्रयोगको क्यामकोर्डरमा क्लिक गर्नुपर्दछ। केवल 'प्रत्यक्ष लाइभ' विकल्प छनौट गर्नुहोस् र सुविधा सक्षम हुनको लागि कुर्नुहोस्।
सक्रियता पछि, केवल सिर्जनाकर्ता स्टुडियोमा जानुहोस् र लाइभ स्ट्रिमि onमा क्लिक गर्नुहोस् जब तपाईं लाइभ जान चाहनुहुन्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि स्मार्टफोनमा यो सुविधा प्रयोग गर्न तपाईंको च्यानलसँग कम्तिमा १००० सदस्यहरू हुनुपर्दछ। यो ग्राहक सीमा लागू हुँदैन यदि तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा वा स्ट्रिमिंग सफ्टवेयरको साथ क्यामेरा मार्फत स्ट्रीम गर्न रोज्नुहुन्छ भने।
YouTube प्रत्यक्ष स्ट्रिमि ofका फाइदाहरू
च्यानल विकासको साथसाथै, यूट्यूबमा लाइभ जाँदा पनि धेरै उल्लेखनीय फाइदाहरू छन्। एकचोटि तपाईंले नियमित स्ट्रीमको लागि रोज्नुभयो भने तपाईं यी सबै महत्त्वपूर्ण लाभहरूको आशा गर्न सक्नुहुन्छ:
वास्तविक-समय दर्शकहरूको अन्तर्क्रिया
प्रत्यक्ष स्ट्रिमहरू तपाईंको दर्शकहरूसँग वास्तविक-समयमा अन्तर्क्रियाको लागि उत्तम तरिका हो। एक अन्तर्क्रियात्मक सत्र तपाईका दर्शकहरु लाई अधिक बाहिर निवेश को लागी बनाउनु हुन्छ। यो तपाइँको सामग्री मा तपाइँको विचारहरु को लागी तपाइँको ग्राहकहरु लाई सोध्ने एक राम्रो तरिका हो, र यो निजीकृत सर्वेक्षण ले कसरी राम्रो गर्ने बारे एक विचार दिनेछ। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सत्रहरू पनि दर्शकहरूको रुचि प्राप्त गर्ने लोकप्रिय विधि हुन्।
YouTube मा त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा छ र सिर्जनाकर्ताहरू भीडको बाँकीबाट बाहिर खडा हुन केहि पनि गर्न तयार छन्। प्रत्यक्ष स्ट्रिमले एक च्यानलमा धेरै जोखिम प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं YouTube मा एक ब्रान्डको रूपमा तपाईंको च्यानल स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, लाइभ स्ट्रिमहरू बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई त्यो प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
च्यानलको ग्रोथ र श्रोताको पहुँचमा बढावा
YouTube सफलता दृष्टिकोण र ग्राहकहरु को बारे मा छ। हरेक च्यानलको उद्देश्य एक पर्याप्त निम्न सिर्जना गर्ने हो, र ठीक त्यस्तै। यस लाइभ स्ट्रिमको स्मार्ट प्रयोग र यससँग आउने प्रत्येक सुविधाहरू नयाँ दर्शकहरूको संख्या बढाउन र उनीहरूलाई लामो समयका ग्राहकहरूमा परिवर्तन गर्न लामो यात्रा गर्न सक्दछन्।
भिडियो मार्केटिंग YouTube मा सामान्य छ। जे होस्, मार्केटिंगका लागि प्रत्यक्ष स्ट्रिमहरू प्रयोग गरेर धेरै लाभदायक हुन सक्छ किनभने तपाईंसँग वास्तविक समयमा तपाईंको दर्शकहरूसँग कुरा गर्ने मौका छ। तपाईं कुनै पनी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। यसले अन्य दर्शकहरूको पनि ध्यान खिच्छ, जो पहिले धेरै रुचि थिएनन्।
YouTube लाइभबाट कसले फाइदा लिन सक्छ?
केही फरक पर्दैन यदि च्यानलसँग हजारौं वा लाखौंमा सदस्यहरू छन्, सबैजना YouTube मा लाइभ भएर फाइदा लिन सक्दछन्। यहाँ केहि च्यानलहरू छन् जुन लाइभ स्ट्रिमहरूको माध्यमबाट ठूला दर्शकहरूलाई संलग्न गर्न सक्दछ।
खेल स्ट्रीमरहरू: भिडियो खेल स्ट्रिमि एक धेरै सामान्य सामग्री प्रकार हो जुन यस प्लेटफर्ममा प्रत्यक्ष साझा गरिएको छ। भिडियो गेम-सम्बन्धित सामग्रीले YouTube मा दैनिक रूपमा लाखौं हेराइहरू ल्याउँदछ र खेल लाइभ स्ट्रिम गर्दै तपाईंको दर्शकहरूलाई संलग्न गराउने निश्चित मार्ग हो।
कर्पोरेट निकाय र ब्रांड: विशाल समूहहरूले पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूले वास्तविक-विश्व बजारमा भएको सोचाइलाई स्वीकार गर्न शुरू गरेका छन्। कम्पनीहरूले आफ्नो नयाँ उत्पादनहरू र सेवाहरूको परिचय गराउन प्रत्यक्ष स्ट्रिमहरू प्रयोग गर्दछ।
सानो व्यवसाय: 'समर्थन सानो / स्थानीय व्यापार' तरंगको साथ, साना ब्रान्ड मालिकहरूले लाइभ स्ट्रिमहरू पनि प्रयोग गर्न सक्दछन् विशाल ब्रान्डहरूले गर्ने तरीकाले। व्यक्ति साना व्यवसाय मालिकहरूबाट किन्नको लागि बढी सचेत भएका छन् र YouTube लाइभले उनीहरूलाई ठूलो दर्शकहरूमा पुग्न मद्दत गर्दछ।
घटना आयोजकहरू: प्रत्यक्ष स्ट्रिमिंग प्रत्यक्ष घटनाहरू सिर्जना गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आयोजकहरूले आफ्ना श्रोताहरूलाई आउँदो घटनाको बारेमा सूचित गर्न सक्दछन् र उनीहरूमा भाग लिनको लागि प्रोत्साहित गर्न सक्छन्।
शिक्षा र सबै अन्य आला: यस प्रकारको च्यानल वा सामग्रीका लागि कुनै बार छैन जुन लाइभ स्ट्रिमहरूको माध्यमबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। तपाईंको च्यानल को आला पकाउने वा सुन्दरता हो, तपाईं एक पटक आफ्नो मनमा राख्नु भएपछि तपाईं लाइभ जान सक्नुहुन्छ।
सफल लाइभ स्ट्रिमको लागि सम्झनको लागि सुझावहरू
तपाईंले गो लाइभमा क्लिक गर्नु अघि, तपाईंको लाइभ स्ट्रिमको एक सफल रन छ भनेर निश्चित गर्न तपाईंले अनुसरण गर्न केही सुझावहरू छन्।
एक रूपरेखा सिर्जना गर्नुहोस्: तपाईंसँग तपाईंको प्रत्यक्ष सत्र के हुनेछ र तपाईं यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुहुन्छ भन्नेको स्पष्ट दर्शन हुनुपर्दछ। एकचोटि तपाईंले यो पत्ता लगाइसक्नुभएपछि, तपाईं प्रत्यक्ष स्ट्रिमको लम्बाइको लागि के गर्नुहुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा योजना गर्नुहोस्। एक प्रत्यक्ष भिडियो रेकर्ड गरिएको भिडियो भन्दा धेरै फरक छ र तपाईंले यसलाई सकेसम्म सहज रूपमा बनाउनुपर्नेछ। विशेष गरी जब तपाईंसँग प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दर्शक छन् र त्यहाँ कुनै पनि अंश पुन: लिदान वा सम्पादन गर्ने विकल्प छैन।
सबै विवरणहरू तैयार गर्नुहोस्: भिडियो शीर्षक, थम्बनेल र वर्णन जस्ता विवरणहरू अग्रिम तयारी गरिनु पर्दछ। तपाइँको प्रत्यक्ष स्ट्रिम सुरू गर्नु अघि, तपाइँसँग यी विवरणहरू तयार हुनुपर्दछ किनभने ती सामग्रीहरू तपाइँको सामग्रीमा फोकस गर्न सजिलो बनाउँदछ एक पटक क्यामेरा सक्रिय छ। तपाईंले स्क्रिप्ट अघि नै योजना बनाउनु पर्छ। पूर्ण स्क्रिप्ट लेख्न यो महत्त्वपूर्ण छैन, बुलेट गरिएको सूची तपाईको प्रवाह सहज छ र यो कुरा भन्नको लागि कहिले पनि बाहिर हुनुहुन्न भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त छ।
यूट्यूब एनालिटिक्स जाँच गर्नुहोस्: समय खोज्नुहोस् जुनमा तपाईंको प्राय जसो ग्राहकहरू प्राय: प्लेटफर्ममा सक्रिय छन्। तपाईंसँग एकै समयमा तपाईंको सबै ग्राहकहरू सक्रिय हुन सक्दैन, तर तपाईंले निश्चित रूपमा बहुमतको आधारमा समय सेट गर्नुभयो। यी तथ्या Smart्कहरूको स्मार्ट प्रयोगको च्यानल विकासमा अपार संभावना छ। किनकि महामारीले सामाजिक प्लेटफार्मको बढाइ प्रयोगको लागि अग्रसर गरेको छ, तपाईं पाउनुहुनेछ कि यस समयमा प्रत्यक्ष रहनाले सामान्य भन्दा बढी दर्शकहरू ल्याउँदछ।
तपाईंको सेटअप पुन: जाँच गर्नुहोस्: एक पटक क्यामेरा शुरू भयो, तपाईंसँग केहि redoing को संभावना छैन। सानो इन्टरनेटमा जानुहोस् जस्तै तपाईंको इन्टरनेट जडानको गति, तपाईंको क्यामेरा सेट गर्नुहोस् र तपाईंको पृष्ठभूमिको रूपमा राम्रो ठाउँ छनौट गर्नुहोस्। साथै, सत्र अघि तपाईंको अडियो र भिडियो सेटिंग्स जाँच गर्नुहोस्।
घटना पदोन्नति: प्रत्यक्ष स्ट्रिम एक घटना हो र प्रत्येक घटनालाई दर्शकहरू आवश्यक हुन्छ। तपाईंको प्रत्यक्ष स्ट्रिमको बारेमा तपाईंको दर्शकहरूलाई भन्नुहोस् र उनीहरूले आशा गरेको खण्डमा आशाको आशा निर्माण गर्नुहोस्। यदि तपाईंको कार्यक्रमलाई प्रमोट गर्न र साझेदारी गर्न आकर्षक ब्यानरहरू सिर्जना गर्न तपाईंको सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्। सम्भावित दर्शकहरू समक्ष पुग्न अन्य सोशल मिडिया ह्यान्डलहरू जस्तै इन्स्टाग्राम र ट्विटरको प्रयोग गर्नुहोस्।
ध्यान-लिने सामग्री बनाउनुहोस्: एकचोटि तपाईंले दर्शकहरूको पर्याप्त संख्यामा रिल गर्नुभयो, अर्को चुनौती भनेको तिनीहरूलाई त्यहाँ राख्नु हो। यो केवल एक रोचक र इंटरएक्टिव प्रत्यक्ष सत्र वितरित द्वारा गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष कुराकानी खोल्नुहोस्, तपाईंको दर्शकहरूका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् र तिनीहरूलाई व्यस्त राख्नुहोस्। यदि तिनीहरूले तपाईंको लाइभ भिडियोमा क्लिक गरे भने उनीहरू स्पष्ट रूपमा तपाईले प्रदान गरिरहनु भएको कुरामा रूचि राख्दछन्। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको एक चीज वितरण गर्नु हो जुन उनीहरूको अपेक्षाहरूमा बाँच्नेछ।
पोस्ट लाइभ एनालिटिक्स जाँच गर्नुहोस्: तपाईंको अघिल्लो लाइभ स्ट्रिमहरूको एनालिटिक्स प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई कुन प्रकारका भिडियोहरू बढी सment्लग्नतामा ल्याइएको छ भनेर अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको दर्शकहरूलाई के मनपर्दछ र त्यो जानकारीको प्रयोग तपाइँमा पूर्ण रूपमा निर्भर गर्दछ।
संक्षेपमा, YouTube एक प्लेटफर्म हो जुन यसका प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई प्रस्ताव गर्न केहि छ। साना च्यानलहरू एकै दिनको अवधिमा पनि ठूलो वृद्धि गर्न सक्दछन् यदि उनीहरूको सामग्री उडायो भने। महामारीले धेरै नयाँ च्यानलहरू ल्याएको छ, यसलाई ठूलो बनाउन कोशिस गर्दै, यसले दर्शकहरूबाट नयाँ साइन-अप ल्याएको छ। माइनर र प्रमुख च्यानलहरू निरन्तर नयाँ र मूल सामग्री ल्याएर आफूलाई अलग राख्न प्रयास गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष स्ट्रिमहरूले एक ठाउँ सिर्जना गरेको छ जहाँ सिर्जनाकर्ताहरूले उनीहरूको दर्शक वृद्धि गर्छन् र उनीहरूका दर्शकहरूसँग स्थायी बन्धन सिर्जना गर्छन्।
सरल तर प्रभावी YouTube सहयोग विचारहरू
प्लेटफर्मको स्थापना भएदेखि यूट्यूबमा सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू सफल सहकार्यमा टु .्गिएका छन् र हालसालका वर्षहरूमा यस प्रवृत्ति पहिलेको भन्दा बढेको छ। यदि तपाईंसँग एक YouTube च्यानल छ र चाहनुहुन्छ भने ...
YouTube तथ्याistics्क तपाईलाई आफ्नो व्यवसायको लागि थाहा हुनुपर्दछ
पहिलो-पहिलो भिडियो २ YouTube अप्रिल २०० 23 मा यसको एक संस्थापकले यूट्यूबमा अपलोड गरेको थियो, र २०० 2005 मा, गुगलले युट्युब bought १.2006 बिलियन डलरमा किनेको थियो। त्यस पछि, यूट्यूब द्रुत रूपमा बढेको छ, ...
YouTube को नयाँ सुविधाहरू र तिनीहरूलाई तपाईंको लाभमा कसरी प्रयोग गर्ने!
ग्रोथ हरेक कम्पनीको अभिन्न हिस्सा हो। साना र ठूला व्यवसायहरू, आफूलाई प्रवर्द्धन गर्ने र उनीहरू प्रतिस्पर्धाको एक भाग बन्न जारी राख्ने अवसरहरूको खोजी गर्छन्। त्यहाँ धेरै प्रचार विधिहरू छन् ...
तपाइँका भिडियोहरूमा प्राय: टिप्पणी गर्न YouTube सदस्यताहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने?
गैर युएस यूट्यूब सिर्जनाकर्ताहरूको लागि कर सुझावहरू
कसरी तपाइँको यूट्यूब भिडियो २०२१ मा उच्च क्रममा
के तपाईं YouTube शर्ट्स मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ?
२०२१ मा तपाइँको यूट्यूब च्यानलको लागि दायाँ को लागी छान्दै
सबपल्स डिलिवरी नेटवर्क प्रयोग गरी नि: शुल्क यूट्यूब सदस्यहरूको साथ तपाईंको प्रतिस्पर्धी किनारा पाउनुहोस्!
भिडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू
सम्बद्ध कार्यक्रम सम्झौता